Hello Nepal News » राकिटिकको कोठा खाली गर्दै बार्सिलोना : लोनमै भए पनि पठाउने !
राकिटिकको कोठा खाली गर्दै बार्सिलोना : लोनमै भए पनि पठाउने !
स्पेनिस बार्सिलोनाले हाल टोलीमा रहेका मिडफिल्डरको भिड कम गर्ने उद्देश्यले एक प्रमुख खेलाडीको बिदा गर्ने तयारी गरेको रिपोर्ट बाहिरिएको छ । हाल टोलीमा रहेका क्रोएसियन खेलाडी इभान राकिटिकलाई बार्सिलोनाले सरुवा सिजन बन्द हुनुअघि नै बेच्ने नभए लोनमै भए पनि पठाउने तयारी गरेको हो ।
यसअघि बार्सिलोना र इटालियन युभेन्टसबीच खेलाडी साटफेरका लागि छलफल चले पनि सहमति जुटेन । युभेन्टसले आफ्ना मिडफिल्डर इम्री च्यान दिएर राकिटिक भित्र्याउन बार्सिलोनासँग प्रस्ताव गरे पनि बार्सिलोनाले राकिटिक बेच्ने प्रस्तावमा मात्रै छलफल गर्ने बताएको थियो । अगस्ट १९ मा बार्सिलोना र युभेन्टसका अधिकारीबीच खेलाडी साटफेरको विषयमा छलफल भएको थियो ।
राकिटिक सन् २०१४ मा स्पेनको सेभिल्लाबाट बार्सिलोनामा अनुबन्ध भएका थिए । त्यसयता सधैं पहिलो रोजाइमा रहँदै आएकोमा डे जोङको आगमनपछि उनको खेल्ने समय कटौती हुन थालिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति १० भाद्र २०७६, मंगलवार १२:१२